Ngakanani idatha ye-backlink eyongokwanela ukuthuthukisa iphrofayela yakho ye-backlink?
Muva nje, i-Google isinikeze imiyalezo ehlukahlukene ehlangene mayelana nendima ye-backlink ye-website rankings. Noma kunjalo, idatha ye-backlink ihlala isetshenziselwa ukusesha izinjini ezisemqoka ukucacisa ukubaluleka negunya lekhasi lewebhu.
Ngenkathi kunezimpikiswano eziningi ezungeze ukuthola ama-backlink amasha kusayithi lakho, ukuqapha nokuthuthukisa okukhona kuyadingeka uma ufuna amaklayenti akho akwazi ukuthola kalula isayithi lakho emiphumeleni yokusesha.
Kulesi sihloko, uzothola izindlela ezingokoqobo zokuhlanganisa idatha ye-crawl nedatha ye-backlink kumakhasi wakho wesayithi.
Engeza idatha yakho yokwenza umxube ku-mix
Ukugcina iphrofayli yesixhumanisi sakho sesayithi ku-TOP, udinga ukuqapha ama-backlink akho namamethrikhi wewebhusayithi bese uhlanganisa le datha ngemininingwane ye-crawl. Ukuze uzuze kule mix mix, udinga ukuthekelisa amakhasi akho nge-backlink idatha kusuka kumathuluzi wakho wokuqapha okuxhumanisa - bagnomaria industriales. Uma uthumela idatha yesixhumanisi kusuka ku-Semalt, MOZ, Ahrefs noma amanye amathuluzi okuhlaziya athandwayo, udinga ukuguqula i-CSV njengengxenye yenqubo yokulayisha.
Uma nje ugijime ukukhwabanisa, ungasebenzisa inombolo yemibiko ezokwenza ngcono idatha yakho yokuxhumanisa ngokunikeza ulwazi mayelana namakhasi akho ewebhu ahlosiwe. Ungaphinda uzuze ngokungeza idatha ye-Google Analytics nedatha ye-Search Console ukuze uhlole ukubaluleka kwamakhasi akho nge-backlink ngokuhlola uma amakhasi akho eqondayo eqhuba ukushayela ekusesheni nasekuthungeni isayithi lakho.
Izindlela zokuhlanganisa i-backlink ne-crawl idatha
Amakhasi aphukile abuyele emuva emuva
Ukuhlola uma isayithi lakho Uphule izixhumanisi, ungasebenzisa i-Semalt Web Analyzer noma amathuluzi we-DeepCrawler. Udinga ukwazi ukuthi yimaphi amakhasi asatholakali ukugwema ukuba nama-backlink akhomba amakhasi aphukile. Noma yiliphi ijusi lokuxhumanisa elitholakala ezixhumaneni eziphukile lizolahleka. Izixhumanisi eziphukile zizophazamisa isipiliyoni sakho somvakashi ngesayithi lakho njengoba zizofika kumakhasi aphukile kunokuba afaneleke abakufunayo. Ngenxa yalokho, i-Google izokwehlisa isikhundla sakho sesayithi.
Ukuze uthuthukise lesi simo, udinga ukubuyisela amakhasi aphukile kwisimo esingu-200 noma usebenzise i-301 ukuqondisa kubo ukuqondisa abasebenzisi kwelinye ikhasi elifanele.
Amakhasi angabhalisiwe angama-backlink
Amakhasi angabhalisiwe angamathegi we-noindex noma i-canonical ekhomba elinye ikhasi. Udinga ukuthola futhi uqede lamakhasi njengoba ebuyela impendulo engu-200, kodwa ayikho inkomba. Amakhasi anjalo angeke akulethe inani noma enze ukuthi i-rankings ihlehlise.
Udinga ukunquma ukuthi ufuna ukuthi lelo khasi litholakale ngezinjini zokusesha noma cha. Uma ufuna ukuthola ithrafikhi kusayithi lakho, kuzomele udinga ukuthi kungani leli khasi lingabonakali futhi lichibiyela. Ungase ungasusi umaki wenkomba noma uyifake esikhundleni sakho ngokuzikhomba ngokuzikhohlisa.
Uma ungafuni ukuthi leli khasi lixoshwe yi-bots search, ungafinyelela esizindeni esixhumanisayo bese ubacela ukuba bashintshe isixhumanisi kwelinye ikhasi elifanele kuwebhusayithi yakho.